SONY XPERIA RAY , NEO , NEO V ,ARC ,ARC S Build No . (4.0.2.A.0.62) For Root Guide - Zomi Computer and Internet Association
Home / Mobile / OS / SONY XPERIA RAY , NEO , NEO V ,ARC ,ARC S Build No . (4.0.2.A.0.62) For Root Guide
SONY XPERIA RAY , NEO , NEO V ,ARC ,ARC S Build No . (4.0.2.A.0.62) For Root Guide
Taang Sianpu May 16, 2012 Mobile, OS
SONY XPERIA RAY , NEO ,NEO V ,ARC ,ARC S(4.0.2.A.0.62) အတွက် ROOT လုပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မိမိ တို့ ဖုန်းဟာ Bootloader Unlocked ဖြစ်နေရပါမယ်
Rootxperia.zip >>>>> http://db.tt/u9dtkUBq
Recovery image for Ray >>> http://db.tt/F8FYXR5l
Recovery image for Neo , Neo V >>>http://db.tt/5UBjbUko
Recovery image for Arc , Arc s >>>http://db.tt/KLathjOM
fastboot+adb Driver >>http://db.tt/hQJt6Lic
အရင်ဆုံး Rootxperia.zip ကို sd card ထဲ ထည့်ပါ။ ZIP မဖြည်ရပါဘူး fastboot+adb Driver ဖိုင်ကို zip ဖြည်ပါ။ ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ boot.img ကို win32\_Fastboot ဖိုဒါထဲထည့်ပါ။ အဲဒီ ဖိုဒါထဲမှာပဲ လွတ်တဲ့နေရာကို Shift+Right Click နှိပ်ပါ..open command Window Here ဆိုတာပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ… CMD တခု ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ cmd ထဲမှာအောက်ပါ Command ကို သေချာစွာလေးရိုက်ထည့် ပေးပါ.
Command နှစ်ခု မှာ အပေါ်တခုရိုက်လို့Waiting For Devices ပဲပေါ်နေပီး ချိတ်လို့မရခဲ့ရင် ဒုတိယ တခုနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
ပီးရင် Waiting For Devices လို့ ပေါ်လာရင် ဖုန်းနဲ့Usb သုံးပြီး ချိတ်ဆက်ပါမယ်..ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းကို ပါဝါ ပိတ်ထားပါ Menu Key ကိုဖိထားပီး ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ မီး ပြာလေး လင်းလာရင် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပီ။ ခဏလောက်ပဲကြာပီး Reboot ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ပြန်တက်လာရင် ….ဒါဆိုရင် recovery mode တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ARC ,ARC S အတွေက် ကတော့ ဖုန်း REBOOT ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ BACK KEY ကို နှိပ်လိုက်လွက်လိုက် လုပ်ပေးမှသာလျှင် RECOVERY MODE ထဲရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
ထိုမှတဆင့်…install zip from sd >> choose zip from sd ကိုသွားပီး မိမိ ထည့်ထားသော Rootxperia.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ထို့ နောက် Install လုပ်ပါ ။ reboot ပြန်လုပ်ပါ ။ ဖုန်းပြန်လည် တက်လာပီးနောက် SuperUser ပေါ် နေတာတွေ့ရပီ ဖြစ်ပါတယ်…… အဆင်ပြေကြပါစေ…..ကိုမျိုး
မယောင်မလည်နဲ့တောကတက်လာပီး ခု အွန်လိုင်းပေါ်က ပြန်မဆင်းတတ်တော့တဲ့ ကောင်ပါ.......